Kadhannaa toorbii galuudhaaf yommuu yaadnu, guyyoota meeqaaf turuu akka yaadne murteessuun ni barbaachisa. Kadhannaan toorbii hanganaa hanga hangasiitti nan tura jennee karoora kan irratti qabannuu dha. Akkaataa humna fi dandeettii keenyaatti guyyaa kanaa hanga guyyaa sanaatti jennee murteessuun Kadhannaa toorbii galuun barbaachisaa ta’a. Fakkeenyaaf: - muuxannoo tokkollee osoo hin qabaatiin namni tokko “holqa keessa nan tura” osoo jedhee faayidaa isaa irra miidhaan isaa caaluu danda’a. Sababni isaas yeroo Kadhannaa toorbiitti qorumsi waanta baay’atuuf, qorumsa isatti dhufu obsaan dabarsuu dadhabuudhaan Torbeen Kadhannaa addaan cituu danda’a. Kanaafuu, yeroon Kadhannaa toorbiin duratti humnaa fi dandeettii keenya giddu galeessa taasisuun murteessuun barbaachisaa dha.